२९ हजार ५ सय ६७ नमुना परिक्षण, २ सय ६० रेड जोनमा – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख ७ गते १७:३७
‘५० बेडभन्दा माथिका अस्पतालले आवश्यक नपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण र शल्यक्रिया रोक्नू’
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ९७ लाख ६४ हजार नाघ्यो
कोरोना भाइरसको आशंकामा हालसम्म २९ हजार ५ सय ६७ नमुना परिक्षण भएको छ । त्यसमध्ये पिसीआरबाट ८ हजार ८१ को नमुना परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । र्यापिष्ट टेष्सबाट २१ हजार ८ सय ८६ जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
आइतबार ५ हजार १ सय ८० जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्, प्रवक्ता देवकोटाले भने,‘ दिनप्रति क्वारेन्टाइनमा बस्ने संख्या घटिरहेको छ । विभिन्न विधि सँगै नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई घरमा थप क्वारेन्टाइनमा पठाएका बस्नको लागि पठाएका छौ ।’आइतबार १ सय ३ जना आइसोलेसनमा रहेका छन र रेड जोनमा पर्नेको संख्या २ सय ६० पुगेको छ ।
पोजेटिभ केसको क्रस भेरिफिकेसनका लागि पश्चिममा भेरी अस्पतालमा, पुर्वमा विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हुने भएको छ । ‘प्रदेश भएका पीसीआर प्रविधिको परीक्षणमा पोजेटिभ आएको खण्डमा पुन राष्ट्रिय प्रयोगशाला गरिन्छ, डा. देवकोटाले भने,‘ जुन त्रस भेरिफिकेशन हो । एउटा मेसिनबाट गर्दा अर्को मेसिनमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’